Garoowe: Xaalladda nololeed ee barakacayaasha. – Radio Daljir
Garoowe, April 10 – Dagaalada ka socda koonfurta waddanka Soomaliya waxay sababeen dhimasho, dhaawac iyo barakac ballaaran oo soo wajahay dadka ku dhaqan koonfurta.
Inta badan dadka kasoo carara dagaallada ka socda magalada Muqdisho caasimadda Soomaliya waxay u qayb sameen laba qaybood qaar waxay noqdeen qaxooti oo waxay maciin bideen waddamada dariska la aha Soomaaliya, qaarka kalena waxay ku barakaceen gudaha Soomaaliya, iyaga oo miciin biday gobollada xasilloonida ka jirto ee Soomaaliya, gaar ahaan Puntland iyo Somaliland, halkaas oo ay ka heleen xeryo ay ku noolaadaan, balse dhibaatadooda leh.
Magaalada Garoowe ee xarunta Puntlabd waxa ay ka mid tahay goobaha ay barakacayaashu sida xoogga ah u joogaan. Maanta ayaa waxaa xerada qaxootiga ee Waaberi soo maray wariye Cali Cabdilcasiis Fantastic dabadeedna waxa uu soo diyaariyay warbixintan qotoda-dheer taasoo uu diiradda ku saarayo xaaladda nololeed iyo tan shaqo ee barakacayaasha.